Peaceful Oromo Protests – July 26, 2020 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooPeaceful Oromo Protests – July 26, 2020
Peaceful Oromo Protests – July 26, 2020
“#injifannoo-WBO-zoonii-lixaa! – Adoolessa 26, 2020
WBOn zoonii lixaa ganama Guyyaa Dilbata har’aa Godina Qeellam Wallaggaa Dambidoollootti waraana Rayyaa ittisa biyyaa hidhannoo guutuu waliin baay’inaan 100 booji’ee jira.
Injifannoo uummata bal’aaf!”
Diramaa Haraa pp Documentary qopheefate dhufaa jira.
Motummaan nafxanyaa Abiy Ahmed shororkeessitoota sagal “kan miseensota Al-Shabaab ta’an,” damee ‘gurraa’ (intelligence office) biyya Xaliyaanii wajjin wal-deeggaruudhaan to’annoo jala akka oolche dudubbachaat jira. Jarri kun kan qabaman biyya Somalia irraayi.
Motummaan erga jara kana qabee jedhe booda, “Jawar faa wajjin wal-qunnamtii qabuu; shororkaa guddaa uumuu dhaf gara Itiyoophiyaatti seenuuf karoora qabatanii sochii irra utuu jiranuu qabamanii,” jedhee dubbii xaxuuf akka deemu, kanaanis yakka Jawar faa irratti jabeessuf qophaa’aa akka jiru barameera.
Adeemsi kun xiyyeeffannoon isaa, hidhamuu Jawar kana yakka shororkeessumaa wajjin walitti hidhee addunyaatti dhiyeessuu dha. Kanaan fayyadamee biyyoota addunyaa akka Jawar hiikkamu dhiibbaa godhuf yaalan hundi kana beekanii akka of qusatan dirquuf barbaada.
Kana qofa miti. Motummaan Abiy jara “shororkeesitoota Alshabaab” jedhee qabe kana qabsoo Qeerroon Oromoo mirga sabaatif gageessaa tureetti xaxuu dhan Qeerroo akka garee shororkaatitti yakkee saaxiluf qophii irra jira. Aktivistoonni habashaa Qeerroon shororkeessituu dha jeettee akka maqaa xureessaa baate ni yaadatama.
Guyyaa kaleessarraa eegalee aktivistoonni Abiy (kan akka Seyoum Teshme and Nathnael Mekonnen), “Ani Qeerroo Oromoo dha. Garuu Qeerroo shororkaa amantii Muslimaa baba’liisuuf barbaadu miti,” jechaa kallattii motummaan Qeerroo Oromoo ittiin yakku gadi baasaa jiru. Kaayyoon isaanii Qeerroo Oromoo akkuma jirutti shororkeessummaa dhan yakkanii ammaa achi damee hawaasaa ta’ee akka itti hin fufne, dhabamsiisuf kan xiyyeeffatee dha.
Qeerroo mirga sabaaf falmee, jijjiirama fidee, biyya hambise adunyaa irratti maqaa xureessanii, akka garee badiititti yakkanii, hamilee tuquu dhan saba Oromoo cabsuuf deemaa jiru fakkaata. Qeerroo amantii dhan qoqqoodanii diiguu dhaf tattaafachaa jiru. Akkuma kanaan dura seenaa biyyattii sana keessatti godhaa turan Oromoota amantii Muslimaa qaban hundasaanii jumlaa dhan yakkanii maqaa balleessudhan hiraarsuf fedhu. Kanaanis, sodaa fi jibbinsa isaan Oromoof qaban (Oromophobia) fii sodaa fi jibbiinsa muslimootaf qaban (islamophobia) agarsiisaa jiru. Oromoota muslima ta’an irratti duula banuu dhan dararaa adda addaa gageessuf tatarkaanfachaa waan jiran fakkaatu.
Waan ta’eef, uummanni keenya dubbii kana haalan hordofuu qaba.
Gama hundaanuu qophii fi of eeggannoo guddaa dhan adeemsa isaanii hordofuun barbaachisaa dha. Jawar hidhaatti hambisuuf, ykn ajjeesuf, Qeerroo diiguf, ummata kernya muslimaa dararuuf, walumaa galatti Oromoo akka sabaatti cabsuuf, tattaaffii guddaatu godhamaa jira.
Kana beeknee, qabsoo hadhooftuu ishee dhumaatif of qopheessuu qabna.
Peaceful Oromo Protests - July 24, 2020
Peaceful Oromo Protests - July 24, 2020 Peaceful demonstrations in Nekemta, Jimma, Dolaa & Awadey…